အချစ်ဆိုသောအရာကို သုံးသပ်ခြင်း | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
တစ်ချို့  က ပြောကြတယ် အချစ် ကို အဆက်အသွယ် မပြတ်စေနဲ့တဲ့
တစ်ချို့  က ပြောကြတယ် အချစ်ကို သွေးအေးမသွားစေနဲ့ တဲ့……..
ဒါပေမယ့် တကယ့် အချစ်မှာ သွေးအေးသွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး……….
သွေးအေးသွားတယ် ဆိုတာ…..မရှိမှတော့ ……………….
တစ်ချို့  က ပြော ကြတယ် အချစ်ကို နာကြင်မှုတွေ မပေးပါနဲ့…တဲ့
ဒါပေမယ့် တကယ့် အချစ်မှာ စိတ်ကုန်သွားတယ်ုဆိုတာ မရှိပါဘူး…………
တစ်ချို့ က ပြောကြတယ် အချစ်ကို လက်လွတ်မဆုံးရှုံးစေနဲ့တဲ့…….
ဒါပေမယ့် တကယ့် အချစ်မှာ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးကြေကွဲမှုဆိုတာ မရှိပါဘူး……..
လက်လွတ်ဆုံးရှုံး ကြေကွဲမှုဆိုတာ …..မရှိမှတော့……..
တစ်ချို့  က ပြော ကြတယ် အချစ်ကို သေခြာရွေးတဲ့
ဒါပေမယ့် တကယ့် အချစ်မှာ အရွေးမှားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး…..
တစ်ချို့ က ပြော ကြတယ် အချစ်ဆိုတာ အပြန်အလှန်ရှိမှတဲ့….
အပြန်အလှန် မချစ်ကြရင် အချစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့………
ဒါပေမယ့် တကယ့် အချစ်မှာ အပြန်အလှန်လိုချင်မှုတွေ ဆိုတာ မရှိပါဘူး…..
အပြန်အလှန်လိုချင်မှုတွေ ဆိုတာ မရှိမှတော့…………..
အဲလိုတွေ ပြောတတ်တဲ့ ကျွန်တော့ကို
from အလင်းစေတမန် (4:53 pm 14 Feb 2009)
This entry was posted on Monday, October 12th, 2009 at 2:40 pm	and posted in အချစ်.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
« Eclipse IDE 3.4.1 J2EE အကြောင်
One response to “အချစ်ဆိုသောအရာကို သုံးသပ်ခြင်း”
အချစ်ဆိုတာ အချစ်ပါပဲတဲ့။ ကျွန်တော့် ချစ်သူ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က။ ကျွန်တော်လဲ အဲလိုပဲ လက်ခံထားပါတယ်။ စိုင်းစိုင်း အချစ်ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ကြိုက်တယ်။ အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲလိုတာပါ။ ကိုယ်က ချစ်နေရရင်ပြီးတာပါပဲ။ ကိုယ်ကို ဘယ်သူမှတားပိုင်ခွင့်မှမရှိတာ။